67HA : Tovolahy norobain’ny mpivaro-tena niarahany, miisa 2 ireo voasambotra
Lehilahy 24 taona sy tovovavy 18 taona no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP7 ny alahady hifoha alatsinainy 21 oktobra 2019 lasa teo, tokony ho tamin’ny 03 ora maraina, noho ny resaka fanendahana. 22 octobre 2019
Araka ny tatitra voarainay avy tamin’ny Polisim-pirenena dia lehilahy iray no niara-nisotrosotro tamin’ny namany maromaro tao amina toeram-pandihizana iray tetsy 67ha tamin’io alin ‘ny alahady io. Rehefa tokony ho tamin’ny 03 ora maraina dia nikasa handeha hody niaraka tamin’ny tovovavy mpivaro-tena iray izy. Nony teny an-dalana àry dia nifanena tamina lehilahy miisa roa namany ilay tovovavy ary niangavy azy roa lahy mba hanatitra azy ireo.
Rehefa tonga tany amin’ny toerana maizimaizina anefa dia nodarohan’ireto mpanatitra roa lahy ilay tovolahy ka lasany tamin’izany ny firavaka teny aminy sy ny karapanondro. Mitentina telo hetsy sy iray tapitrisa Ariary ny totalim-bidin’ny entana very.
Lasa nandositra moa ilay tovovavy mpivaro-tena sy ireo mpanendaka namany roa lahy taorian’izay, raha toa ka niantso vonjy kosa ilay voaendaka ary tonga namonjy azy ny polisy. Nokarohina avy hatrany ary ireo olon-dratsy, ka fotoana fohy taty aoriana dia voasambotra ny tovolahy iray sy ilay mpivaro-tena. Mbola karohina kosa ilay lehilahy faharoa. Mbola tsy tafaverina amin’ny tompony ihany koa ireo entana very voalaza ireo.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68193) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (637) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (330) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (226) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (211) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (193) 18 février 2020